Sketch - Draw & Paint 8.6.T.0.10 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 8.6.T.0.10 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား ေဖ်ာ္ေျဖေရး Sketch - Draw & Paint
Sketch - Draw & Paint ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
*** ဟာ Sketch ဝန်ဆောင်မှုများ၏အွန်လိုင်းအစိတ်အပိုင်းများကိုစက်တင်ဘာလ, 2019. ၏ 30 ရက်နေ့ရပ်စဲလိမ့်မည် ***
ဤသည်ကို Sony ကနေတရားဝင် Sketch App ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံကြမ်းတစ်ခု ဆွဲ ပျော်စရာများနှင့်မသက်ဆိုင်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ် ဖန်တီးမှုဖြစ်လိုသူမည်သူမဆိုမှအတွေ့အကြုံ, တတ်၏။ သင်လိုအပ်ခဲ့လျှင် လှုံ့ဆော်မှု Sketch အသိုင်းအဝိုင်း သင်လေ့လာစူးစမ်းခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ရန်အဘို့အဒီဂျစ်တယ်အနုပညာတစ်ခုအဆုံးမဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင့်ကိုယ်ပိုင်အနုပညာမျှဝေနေဖြင့်အခြားသူများကိုအတုယူအားနှင့်ရပ်ရွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
✓ ပျော်စရာစုတ်တံနှင့်ရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု. ဖန်တီးမှုပုံကြမ်းဆွဲပါ
✓ စာသားနဲ့အခမဲ့စတစ်ကာများနှင့်သင်၏ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို Enhance
✓ အလွှာနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပုံကြမ်း Build
✓ Inspire နှင့်အနုပညာအသိုင်းအဝုိင်းရှိအခြားအသုံးပြုသူများထံမှလှုံ့ဆော်မှု get
✓ သို့ပြန်သွားရန်တက်မျိုးစုံ devices များရန်သင့်ရေးဆွဲတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်
- အကွိမျမြားစှာစုတ်တံ, ခြံနှင့်ခဲတံ
- Eraser ကို
- Bucket ဝစွာ
- နောက်ခံ selector
- အရောင် tool ကို
- Image ကိုအရောင်ညှိနှိုင်းမှု
- ရွှေ့, စကေးလှည့်နှင့်လှန်
- ပန်နှင့် zoom ကို
- Undo / ပြန်လုပ်ရန်
- မျိုးစုံပစ္စည်းများမှ Backup ကိုများနှင့်ထပ်တူပြုခြင်း
- ထိပ်တန်းစာရင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ feed ကို
- hashtag ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပြ, manga ကို, anime, ဒါမှမဟုတ်ပုံတူအဖြစ်သင်နှစ်သက်တဲ့ပုံဆွဲစတိုင်ကိုရှာဖွေလွယ်ကူစေသည်
- သင့်အကြိုက်ဆုံးအနုပညာရှင် Follow တူနှင့်အခြားသူများပန်းချီကားများအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်
- ထို Sketch အနုပညာအသိုင်းအဝုိင်းမှဝေမျှမယ်နှင့်အခြားသူများထံမှအသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု get
- အသုံးပြုသူများနှင့် tags များရှာရန်
- အနုပညာလေ့လာစူးစမ်းရန်လိုအပ်ဘယ်သူမျှမရဲ့ login
Sketch - Draw & Paint အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Sketch - Draw & Paint အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Sketch - Draw & Paint အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Sketch - Draw & Paint အား အခ်က္ျပပါ
dazzwillbe စတိုး 5.77k 1.12M
Sketch - Draw & Paint ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Sketch - Draw & Paint အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 8.6.T.0.10
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.sonymobile.com/global-en/legal/privacy/
Sketch - Draw & Paint APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ